Baiboly pejy 683 - Ny Baiboly
Voalohany < 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 Manaraka Farany
1 Tesalonisiana toko 5 (tohiny)
27Mihanta aminareo amin'ny anaran'ny Tompo aho, mba vakio amin'ny rahalahy rehetra ity taratasy ity.
28Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika. Amena.
2 Tesalonisiana toko 1
Fiarahabana - Fisaorana an'Andriamanitra - Hisy hamaly ny mpanenjika.
1Paoly sy Silvano ary Timote mamangy ny Eglizy any Tesalonì ka izay tafaray ao amin' Andriamanitra Raintsika sy Jesoa-Kristy Tompo: 2ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra Raintsika sy Jesoa-Kristy Tompo.
3Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo, ry rahalahy, fa rariny izany, satria ny finoanareo, mandroso fatratra; ny fifankatiavanareo, mitombo hatrany hatrany. 4Tonga reharehanay any amin'ny Eglizin'Andriamanitra hianareo, noho ny faharetanareo sy tsy fivadihanareo, na dia ao anatin'ny fanenjehana amam-pahoriana rehetra manjò anareo aza. 5Famantarana ny hamarinan'ny fitsaran'Andriamanitra izany, dia mba hatao mendrika ny fanjakan'Andriamanitra izay antony iaretanareo hianareo.
6Satria, moa tsy izao va no rariny amin'Andriamanitra: ny hamaly fahoriana an'izay mampahory anareo, 7sy ny hanome fialan-tsasatra anareo nampahoriana, miaraka aminay kosa, rahatrizay hiseho avy any an-danitra, ao afovoan'ny afo miredareda, Jesoa Tompo mbamin'ny anjelin'ny heriny, 8hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra, sy tsy mankatò ny Evanjelin'i Jesoa Tompontsika? 9Fahaverezana mandrakizay, lavitra ny tavan'ny Tompo, sy ny voninahitry ny heriny, no havaliny an'ireny, 10amin'ny andro hahatongavany, mba hanomezam-boninahitra azy eo amin'ny olo-masiny, sy higagana azy eo amin'izay rehetra nino; ary hianareo dia nino ny fanambaranay ny Evanjely teo aminareo. 11Mandra-pihavin'izany dia tsy tapaka ny mivavaka ho anareo izahay, mba hataon'ny Andriamanitsika mendrika ny niantsoany anareo hianareo, ary mba hotanterahiny amin-kery avokoa ny faniriana tsara rehetra sy ny asan'ny finoanareo, 12ka hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesoa Tompo, sy hianareo koa ao aminy, araka ny fahasoavan'ny Andriamanitsika sy Jesoa-Kristy Tompo.
13Ary izahay, ry rahalahy malalan'ny Tompo, dia tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo, noho hianareo nofidin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany hahazo famonjena amin'ny fanamasinan'ny Fanahy, sy amin'ny finoana ny marina; 14ary ny Evanjelinay no niantsoany anareo ho amin'izany, mba hahazoanareo ny voninahitr'i Jesoa-Kristy Tompontsika. 15Koa tomoera tsara, ry rahalahy; ary tano ny fampianarana noraisinareo, na ny tamin'ny teny am-bava, na ny tamin'ny taratasinay. 16Enga anie Jesoa-Kristy Tompontsika, sy Andriamanitra Raintsika, izay efa tia antsika, ka nanome antsika fanalana alahelo mandrakizay, sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, 17no hanafaka alahelo ny fonareo sy hankahery anareo amin'ny asa tsara aman-teny soa rehetra!
2 Tesalonisiana toko 3
Fangataham-pivavahana - Ny tsy maintsy hiasàna - Fanalavirana ny tsy mety manaiky - Famaranan-teny.
1Farany, ry rahalahy, mivavaha ho anay, mba handroso faingana ny tenin'Andriamanitra, ka hankalazaina toy ny aty aminareo; 2ary mba ho afaka amin'ny olon-dratsy sy mahasosotra izahay; fa tsy an'ny olona rehetra moa ny finoana. 3Dia Andriamanitra izay tsy mivadika kosa, no hankahery anareo sy hiaro anareo amin'ny ratsy. 4Matoky anareo ao amin'ny Tompo izahay, fa sady manao no mbola hanao ny zavatra nandidianay hianareo. 5Ary enga anie ny Tompo ka hitari-dàlana ny fonareo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny faharetan'ny Kristy.
6Mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesoa-Kristy Tompontsika izahay, mba hisaraka amin'ny rahalahy rehetra tsy manaraka ny fampianarana noraisiny taminay, fa manao fitondran-tena tsy marina. 7Efa fantatrareo izay tokony hataonareo mba hakan-tahaka anay, fa tsy mba nanao izay tsy marina teo aminareo izahay. 8Tsy mba nihina-mofon'olona maimaim-poana izahay, fa niasa andro aman'alina, ka sasatra sy trotraka erý, mba tsy hahavaky tratra na dia ny iray akory taminareo aza; 9tsy noho izahay tsy manam-pahefana anefa, fa noho izahay te-hanolo-tena ho fakan-tahaka ho anareo. 10Fony mbola tany aminareo ihany izahay dia efa nandidy anareo hoe: Raha misy tsy mety miasa, dia aoka izy tsy hihinana koa. 11Renay anefa fa ny sasany aminareo dia tsy mahay miaina, sady tsy miasa fa manaonao foana. 12Mandidy sy mananatra izany olona izany ao amin'i Jesoa-Kristy Tompo izahay, mba hiasa amim-piadanana, ka hihinana ny azy ihany.
13Ary aoka hianareo, ry rahalahy, tsy ho ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. 14Raha misy tsy manaiky ny teninay amin'ity taratasy ity, dia mariho izy, ka aza mikambankambana aminy intsony mba hahamenatra azy. 15Aza atao fahavalo anefa izy, fa anaro toy ny rahalahy. 16Ny Tompon'ny fiadanana anie hanome fiainana anareo mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ho aminareo rehetra anie ny Tompo.
17Ity no veloma soratan'ny tànako, izaho Paoly. Toy izao no soratro, ka ataovy famantarana ny taratasiko rehetra. 18Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika. Amena.
1 Timote toko 1
Fiarahabana - Ny amin'ny fampianaran-diso - Ny nibebahan'i Md. Paoly - Ny hiadiana ny ady tsara.
1Paoly, Apostolin'i Jesoa-Kristy, araka ny didin'Andriamanitra Mpamonjy antsika, sy Jesoa-Kristy fanantenantsika,
Pejy: Voalohany < 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3361 seconds